काठमाडौंका धनाढ्‍य मन्त्रीले किन लिए ५० लाख ! | Seto Khabar
काठमाडौं, माघ २८ । उपचार खर्च अभावमा धेरै नेपालीको सानो रोगका कारण अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। धेरै नेपाली एक एक रुपैयाँ जुटाउन सडकमा भिख मागिरहेका भेटिन्छन्।
सरकारले थोरै मात्र उपचार खर्च व्यवस्थितरुपमा सर्वसाधरणलाई वितरण गर्न सकेमा धेरैको ज्यान जोगिने अवस्था छ । तर, बाहिरिने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूकहाँ पहुँच बनाउने र आफ्ना आसेपासेलाई मुठ्ठी खोलेर राज्यकोषको रकम धमाधम बाँडिरहेका छन्।
यस्तै मुठ्ठी खोलेर काठमाडौंका स्थायीबासिन्दा तथा धनाढ्य एक मन्त्रीलाई देउवाले धक फुकाएर राज्यकोषको रकम प्रदान गरेका छन्। यी मन्त्रीलाई न त कुनै ठुलो रोग लागेको छ न नै कुनै ठुलो विपत्ति या संकट ? बाहिरिने बेलामा उनले पनि राज्यको ढुकुटीबाट ठुलै पोको लिएर निस्कने भएका छन्।
काठमाडौंका स्थायीबासिन्दा तथा धनाढ्य मन्त्रीकारुपमा चर्चित देउवा सरकारका रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले बाहिरिने बेलामा ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग लिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर काठमाडौं-२७ का स्थायी बासिन्दा रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग लिएपछि आलोचना सुरु भएको छ।
मन्त्री प्रधानले नै क्याबिनेट बैठकमा आफुलाई उपचार खर्च वापत ५० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री प्रधानले त्यस्तो प्रस्ताव राख्दा अन्य मन्त्रीहरु एकापसमा मुख हेराहेर गरेका थिए। कुनै पनि किसिमको प्राणघातक रोग लागेको प्रमाणित नभएका मन्त्री प्रधानले त्यो प्रस्ताव राख्दा अन्य मन्त्रीहरुबीच मुखामुख भएको थियो।
काठमाडौंका रैथाने करोडपति मन्त्री प्रधानको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी उपचार खर्च वापत यति ठूलो रकम एकैचोटी उपलब्ध गराउने निर्णय शुक्रबारै गरिसकेको छ। काठमाडौं-६ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद् समेत रहेका प्रधानको करोडौँ सम्पत्ति रहेको कुरा उनले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणले नै प्रष्ट देखाएको छ।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण उनीसँग करोड भन्दा माथिको सम्पत्ति छ। उनीसँग काठमाडौं महानगरपालिका-२७ मा ५ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा छ। त्यसैगरी नागर्जुन नगरपालिका-६ इचङ्गुमा ४२५.०६ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको जमिन पनि उनीसँगै छ।
उनको घर अहिले काठमाडौँ महानगपालिका-२७ स्थित ज्याठामा रहेको छ । प्रधानले आफ्नो जग्गाजमिन तथा अन्य जायजेथाको सबै विवरण समेत पेस गरेका छैनन् । उनको सम्पति विवरणमा सात थान हिराजडित गहना पनि रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी २० तोला सुन र ७ किलोग्राम चाँदीका गहना आफूसँग रहेको उनले जनाएका छन् । त्यसैगरी नेपाल बैँक लिमिटेड कान्तिपथमा ७५ हजार र एभरेष्ट बैंक सिंहदरबारमा ४ लाख ५१ हजार ३५ रुपयाँ रहेको उल्लेख छ । उनको अन्य धेरै स्थानमा भएको लगानी र सेयरको विवरणसमेत सम्पति विवरणमा पेस गरिएको छैन। उनीसँगै अन्य मन्त्रीले पनि आफ्नो धेरै सम्पति लुकाएको आरोप लागिरहेको छ।
काठमाडौंमा कांग्रे‍सका चर्चित नेताका रुपमा रहेका प्रधानले सम्पत्ति विवरणमा आफ्नो जायजेथा स्पष्ट खुलाएका छैनन् । स्वच्छ छविका नेता मानिने प्रधानले ५० लाख सहयोग लिएपछि पार्टी भित्रैबाट पनि कडा आलोचना खेप्नु परेको छ। उनको स्वच्छ छबिकै कारण वाम गठबन्धनको लहर भएको अवस्था पनि गत निर्वाचनमा काठमाडौंबाट चुनाव लडेर उनी विजयी पनि भए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर छापेको छ।